We.com.mm - သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်တွေမှာ VIU နဲ့အတူတူစွန့်စားခန်းတွေစတင်လိုက်ရအောင်
သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်တွေမှာ VIU နဲ့အတူတူစွန့်စားခန်းတွေစတင်လိုက်ရအောင်
မီးရှုးမီးပန်းတွေ၊ ရောင်စုံမီးသီးတွေနဲ့အတူတူ ကိုယ်တို့ရဲ့သီတင်းကျွတ်အိပ်မက်လေးကလည်း ပိုပိုပြီးအသက်ဝင်လာတယ်။ ပိတ်ရက်တွေမှာဘာလုပ်ကြမလဲ ..။ သူများတွေလို ညဘက်လည်းအပြင်မထွက်ချင်၊ ခဏတဖြုတ်လေးလမ်းလျှောက်ပြီး အိမ်ထဲမှာနေကြမယ့် အိမ်တွင်းပုန်းလေးတွေအတွက်တော့ သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်တွေက နှမြောစရာကြီးများဖြစ်သွားမလား ?
နိုးပါ … အဲ့ဒီလိုအရေးတွေကိုကြိုမြင်လို့ VIU က သူငယ်ချင်းတို့အတွက်ကြိုပြီးစီစဉ်ထားတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ VIU မှာ သူငယ်ချင်းသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဇာတ်ကားတွေကို အချိန်နဲ့အမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုမရိုးရ၊ မထပ်ရလေအောင် ကြည့်လို့ရတာပါပဲ။
သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ဟာ သူငယ်ချင်းအတွက် စွန့်စွန့်စားစားနဲ့သွားရမယ့်ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီစွန့်စားခန်းခရီးထဲမှာ သူငယ်ချင်းအတွက်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ခရီးကို ဟာသဇာတ်ကားလေးတွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစတင်ပြီး အက်ရှင်ကားကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ Tempo ကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်မြှင့်မလား … အောက်တိုဘာလို ဆောင်းဦးရာသီနဲ့ကွက်တိ Korea Drama လေးတွေကြည့်ရင်း ကြည်ကြည်နူးနူးလေးဖြတ်သန်းမလား … ဒါမှမဟုတ် ကာတွန်းကားလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ရက်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ပြီးကုန်ဆုံးစေမလား …. သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့စွန့်စားခန်းခရီးရှည်ကြီးကို ကိုယ်ကြိုက်သလို customize လုပ်လို့ရပါတယ်။
အခုကတည်းက သူငယ်ချင်းရဲ့ခရီးရှည်ကြီးကို ဘယ်လိုစတင်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလိုက်ပါတော့။ VIU ရဲ့ Adventure Tour နဲ့အတူတူ ကိုယ်တို့ရဲ့ပျော်စရာသီတင်းကျွတ်လေးကို ခံစားမှုရသမျိုးစုံနဲ့အကောင်းဆုံးကုန်လွန်လိုက်ကြရအောင်လား …….
လေလည်တာ နဲ့ နှာချေတာတွေ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ရာကနေ မျက်လုံးပါစွေသွားတဲ့သူ
ကျောက်ဆည်လူသတ်တရားခံကို အိမ်စီးကားနဲ့တိတ်တဆိတ်ရုံးထုတ်ခဲ့လို့ အတိုက်အခံဖြစ်ခဲ့
Myanmar Idol ရဲ့ ပထမဆုံး မိန်းကလေးဆုရှင် Esther
ပရိသတ်တွေကို မကြာခင်ချပြတော့မယ့် ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခု ရိုက်ကူးနေတဲ့ အိမ့်ထရက်ရှာ ( Eaint Treasure )